Isibongo Frolov, okuzoxoxwa ngayo kulesi sihloko, yebo, akuyona ezingavamile. Masenze umlando kancane ukuqonda igama abenakho wathatha.
Nokho, Isibongo Frolov, umsuka okuyinto kokufunda lesi sihloko, njengoba, mhlawumbe, kungase kubonakale kakhulu kithi, kuyafaneleka ukuba kusiholela ngqo igama Frol, lokhu akulona iqiniso.
Umlando waleli gama elisuka Latin. Qamba Frol, kuvela, livela egameni "Floris", ie "imbali", okusho ngesiRashiya ekuphileni kwansuku zonke kancane angahleliwe. Kuyamangalisa ukuthi leli gama imisuka obucayi kangaka futhi senkondlo.
Frolov Isibongo, umsuka zazo kumele idluliselwe 15-18 eminyaka, kwakhiwa kusukela esontweni okuthiwa Frolov.
I usanta leli gama engavamile - umfel 'ukholo Frolov. Ngokusho incazelo yokuphila kwakhe, yena nomfowabo Laurus ebuKristwini amakhulu abasebenzi ababe namaqaba.
Day of Remembrance Frola futhi Lavra - 31 Agasti. Bona - the ongumvikeli izilwane, ikakhulukazi amahhashi.
Ngaphambili, isithonjana ngesithombe labo santa kwaba kuwo wonke ekhaya. Babebheka umxhasi zamahhashi kanye bazoba ngabelusi elula. Akumangalisi-ke ukuthi manje lezi zabangcwele ukhohliwe, ngoba manje ihhashi alisetshenziswa ukuhamba nsuku zonke.
Ngokumangalisayo, ukubaluleka igama Frolov ngendlela engavamile neze zithandelana umlando wenkolo. Ngisho kwamanje, abantu abanhliziyo umsebenzi e ngandlela-thile exhunywe ne zokuzalanisa amahhashi, zama ukuthola le isithonjana ezingavamile.
portrait kwenqondo kanye nencazelo yegama, okuyinto kwakheka isisekelo
Frolov nesibongo, imvelaphi, umlando, ogama value ihlaziye, njengoba kuboniswa izibalo, njalo ngonyaka ezingasho kuyanda: maphakathi nawo-90s ubaholele yesibili izibongo eziyishumi ezivamile.
Ngokusho survey abamele zomphakathi yalolu hlobo, futhi igama - akulutho ezifana nobuhlanga, ziyehluka ejabule, uthando wokuphila, umsebenzi. Ziyakwazi ophanayo, olungenabugovu, bayaqonda kalula ushintsho.
Isibongo Frolov, umsuka okuyinto manje sifundela, kufuna ukuba kudingeka sihlole igama ngokwayo, okuyinto evela elithi "imbali". Kuyinto engavamile ngesizathu ukuthi iduna, futhi izimbali, ngokuvamile ehambisana amagama zesifazane. Nokho, kwamanye amazwe, ethandwa igama zesifazane Flora, Florinda.
Kukholakala ukuthi indoda le Frol uyakwazi ukudala emcabangweni wakhe isithombe engavamile. Kuyinto kakhulu ngokomzwelo, sensitive izenzo ngokungenabulungisa uhlala ngakho kuze yokuguga. Indoda igama Frol ngokuvamile ebucayi.
Ngokwemvelo ukuthi abanalo rationality, sinekhono ukuhlela amasu, uthambekela izenzo okuvele izinqumo.
Mayelana izihlobo zabantu ukusekela leli gama umnene futhi umcabangele. Frol, njengoba umthetho, indoda enhle nomkhaya.
Ngo abesilisa igama elifanayo amandla eqinile, okwenza kube namandla nakakhulu, ngenxa yokuthi manje neze ubani is ngakho wabiza amadodana. Kuyaphawuleka ukuthi Frol obaladaet ebuhlungu kakhulu ukuzethemba, akuzona njalo wakwazi kanjani ukubhekana ngokuphumelelayo nemizwelo yabo, okubonisa bomoya.
Ngokungavamile, nobulukhuni namandla leli gama kuhlangene sensitivity high. Lokhu kungenxa yokuthi umsuka igama Frolov Frolov futhi kwakheka isisekelo igama labo ezihambisana ngegama elithi "imbali", njengoba ongumvikeli lolu hlobo futhi livikela abantu abaxhume nge zokuzalanisa amahhashi.
Ngokuvamile, amalungu ahlonishwayo uhlobo lwe
Umsuka wegama amagama Frolov Frolov has a izimpande zihlahla, kodwa indaba izinhlamvu adumile akazi kangaka.
Akwaziwa umndeni lasendulo Frolov, bempi ababezishaya abakhonza ekhonza ngaphansi uCatherine Omkhulu.
enhle kakhulu, mhlawumbe, ithathwa ngokuthi umbhali uPetru Alexandrovich Frolov, owaphila ngekhulu le-19.
Ngemva kweminyaka engaba ngu nanhlanu wakhonza e-Wezangaphakathi futhi Petersburg Duma. Kusukela maphakathi nekhulu le-19, waqala ukuhlanganyela ngenkuthalo ekulungiseleleni nezindaba omagazini ezifana "Amanothi we lawobaba", "Contemporary", "The Voice" kanye nabanye. Maphakathi nawo 60 Petr Aleksandrovich wahlanganyela editorship salo magazini ngokuthi "iziNyathelo we Petersburg City Council."
I kudlala ethandwa kakhulu eyabhalwa lo mbhali, babe "Ukuze sibe noma ukuba 'futhi" soulmate ". Le misebenzi kusinika litfuba lekufaka imikhuba ye isikhathi, ikheli nezindaba ubuhlobo obuhle bomkhaya. amahlaya akhe "uthando Little" yaziwa.
Ngakho, isibongo Frolov, umsuka zazo kusiholela 15-18 leminyaka, inomlando ezithakazelisa kakhulu, azinake yethu.
Isikhumbuzo behlonipha weminyaka engu 300th we Romanov lwamakhosi (Kostroma): incazelo, ikheli
Indlela ukugcina nezibiliboco ekhaya: izeluleko kongoti
Ifilimu "uCarol": ukubuyekezwa, indaba, abadlali kanye nezindima